नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्ने उपेन्द्रको प्रस्ताव अस्वीकार – email khabar | Latest news of Nepal
नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्ने उपेन्द्रको प्रस्ताव अस्वीकार
प्रकाशित : २०७३ पुष १० गते २:२२
पुस १०, काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मधेसवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रयास असफल भएको छ। उपेद्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकीकरण प्रयास असफल भएपछि कार्यगत एकता अघि बढेको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनसँग कार्यगत एकता गर्ने भट्टराईको चाहना पनि तत्कालका लागि असफल भएको छ। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने फोरम नेपाल अध्यक्ष यादवको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाका साथै संघीय गठबन्धनका नेताले अस्वीकार गरेका छन्। मंसिरयता पटक पटक बसेको मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा फोरम नेपाल अध्यक्ष यादवले भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, यादवको प्रस्ताव मधेसी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनका नेताले अस्वीकार गरेपछि तत्काललाई कार्यगत एकता नहुने भएको हो।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्न नसकिने प्रस्ट पारे। मोर्चा–गठबन्धन बैठकमा नयाँ शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको बताउँदै उनले तत्काल त्यस्तो एकताको सम्भावना नरहेको जानकारी दिए।
संविधान जारी गर्ने समयताका नयाँ शक्ति संयोजक भट्टराईको प्रमुख भूमिका रहेकाले उनकै कारण मधेस आन्दोलनमा धेरै सहिद भएको उनले बताए। ‘मधेसमा संविधानको विरोधमा आन्दोलन भइरहँदा भट्टराई संविधान जारी गर्ने कार्यमा सक्रिय थिए, मधेस आन्दोलनको भावनाविपरीत काम गर्नेसँग कसरी कार्यगत एकता गर्न सकिन्छ ?’ सुनमको प्रश्न छ।
महिलाबाट पुरुष बन्न गृहमा निवेदन!
गाविस सचिवको तह वृद्धि हुने !